दाङ, २५ मंसिर । अहिलेका विद्यार्थी कतिले खेतबारी देखेका हुन्छन् ? अनुमान गर्न गाह्रो हुन्न होला, किनकी निक्कै थोरैले मात्रै खेतबारीबारे बुझेका हुन्छन् । सोमबार तुलसीपुर, दाङ उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित शिशिर बहुउद्येश्य कृषि फार्मका विद्यार्थीको हुल देख्दा स्थानियबासीको रमिते नै लागेको थियो । सफाचट प्राईभेट बोर्डिङ स्कूल बृहत अरनिको ईङ्लिस स्कूलका लगभग ५०, ६० जना विद्यार्थीले पढाईका सिलसिलामा त्यो फार्ममा अनुगमन गर्न गएका थिए । कक्षा ७ र ८ का विद्यार्थीहरुले अकुपेसन अर्थात पेशा÷व्यवसाय विषयक पढाईका सिलसिलामा यस फार्ममा भ्रमणमा ल्याईएको थियो ।
यहाँका संचालक शिशिर राउत पनि निक्कै हर्षित भए । किनभने हेपिएको क्षेत्रमा कलिला विद्यार्थीका नयाँ नयाँ चाँसो र जिज्ञासा एक एकगरी मेटाईदिएका थिए । ति विद्यार्थीहरुमध्ये अधिकांसले दर्जनौ प्रश्नहरु गरेका थिए । ‘खेती किसानीबारे धेरैलाई थाहाँ समेत नभएको विद्यार्थीहरु थिए’, संचालक शिशिरले भने, ‘ति विद्यार्थी धेरैले भविष्यमा खेतीपाती गरेरै बस्ने बाचा गरेका छन् ।’ हुन त उनीहरुले भविष्यमा के गर्छन, त्यो फरक विषय भयो, तर यसरी कृषि फार्ममा विद्यार्थीलाई लगेर त्यसबारे जानकारी गराउँदा उनीहरुको मस्तिष्कमा भने निक्कै कुराको जानकारी हुने शिशिर बताउँछन् । स्कूल पनि स्थानिय नै भएको हुदा लगभग दुई घण्टा ति विद्यार्थीलाई विताउँन कुनै गाह्रो नभएको स्कूल संचालक बताउँछन् ।
हाल, फार्ममा गोलभेंडा र काउँली फलाईएको छ । पहिले एक डेढ विगाहामा लगाईएको यि तरकारीबालीलाई साथीहरुसंग मिलेर थप १२ विगाहामा विस्तार गरेपछि यस फार्मको रुप नै फेरिएको छ । प्लाष्टिक टनेल तथा खुल्ला रुपमै गरिएको यस तरकारी खेतीबाट आम्दानी पनि राम्रै हुने शिशिर वताउँछन् । पहिले डेढ विगाहामा खेती गर्दा लगभग ८, १० लाख फाईदा दिदै आएका शिशिरले साथीहरुसंग मिलेर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका छन् । अर्को बर्षदेखि आम्दानी पनि राम्रै हुनेमा उनी ढुक्क छन् ।